Sikorsky - S76 Nemeth FS2004 ဒေါင်းလုပ်
Size: 44.84 ကို MB
အဆိုပါ Sikorsky S-76 ရဟတ်ယာဉ်ဝိညာဉျတျောကိုအမေရိကန်ထုတ်လုပ်သူ Sikorsky လေယာဉ် Corporation ကစီးပွားဖြစ်ထုတ်ကုန်ဖြစ်ပါတယ်, တစ်ဦးစွယ်စုံအလတ်စား helico ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာလေးများ၏ဓါးသွားနှစ်ခုရဟတ်တစ်ခုချင်းစီတပ်ဆင်ထားသည်နှင့်တစ်ဦးပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးရန်ဆင်းသက် add-on gear.Superb FS2004 ဘို့ payware ယခုအားဖြင့် 2011 ကတည်းက freeware မီက ... ဆက်ဖတ်ရန်
စာရေးသူ Nemeth Designs
Sikorsky S-70A Pack ကို V1 FS2004 HOT ဒေါင်းလုပ်
Size: 20.46 ကို MB
တစ်ဦးကိုမှန်ကန်ကျောက်မျက်! အဆင်းလှသောကို virtual cockpit, 2d panel ကိုနှင့်ထုံးစံအသံနှင့်အတူထောက်ပံ့ပေး, ပြီးပြည့်စုံ package.The S-70A ဘလက်ဟော့အားဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးအ Multi-မစ်ရှင် Sikorsky ၏ပို့ကုန်ဗားရှင်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါမူလတန်းတပ်တတပ်ကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးအထောက်အပံ့အဖြစ်ဘလက်ဟော့ရဟတ်ယာဉ်၏မစ်ရှင်, ဒါပေမယ့်, ထို့အပွငျ၌, ... ဆက်ဖတ်ရန်
Sikorsky S-55 လေပွေ FS2004 ဒေါင်းလုပ်
Size: 5.22 ကို MB
အဆိုပါများအတွက်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ FSX သဟဇာတ variantHere AlphaSim ဒါရိုက်တာအမြင်အာရုံကောင်းသောရဟတ်ယာဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျအားသာချက်ယူသင့်ပါတယ်ဒါကြောင့်ယခင်က payware, 2009 ကတည်းကကအခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲဖြစ်လေပြီတကား HistoricFirst ရဟတ်ယာဉ်ကုန်တင်စစ်ဆင်ရေး, အမေရိကန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုက Sikorsky ကထုတ်လုပ်သည့် S ကို 55 တစ်ဦးက H19 ၎င်း၏ပထမဦးဆုံးအော်ပရာလုပ် ... ဆက်ဖတ်ရန်
Sikorsky S-70 FireHawk နာရီ-60F FS2004 ဒေါင်းလုပ်
Size: 7.3 ကို MB
မီးဆန့်ကျင်တိုက်ထုတ်နိုင်ဖို့ရဟတ်ယာဉ်။ ဤသည်တဲတော် Sikorsky နာရီ-စီးရီး 60F တစ်ဦးအဆက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ add-on အများအပြားကွဲပြားခြားနားသောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်အတူရရှိနိုင်ပါသည်။ ကိုင်တွယ်ရန်အလွန်ခက်ခဲရဟတ်ယာဉ်, ငါတို့သည်သင်တို့အထဲကမှတ်ချက်ကိုမျှော်လင့်! သင့်ရဲ့ဆွဲဆောင်မှုကိုဖော်ပြရန်တှနျ့ဆုတျမထားပါနဲ့။ ကောင်းသောစမ်းသပ်မှုနှင့်ကောင်းမွန်သောခရီးစဉ်, ရန်ပွဲ ... ဆက်ဖတ်ရန်
စာရေးသူ Moore က et Kirk က Sunley
ဖိုင်နာမည် sikorsky_s-70_firehawk _hh-60f_fs2004.zip
Sikorsky CH-124 ပင်လယ်ဘုရင်, HAR3A FS2004 HOT ဒေါင်းလုပ်
Size: 9.39 ကို MB
sea.Very ကောင်းတဲ့မှာကယ်ဆယ်ဘို့ရဟတ်ယာဉ်, ဒါပေမယ့်လေးလံသော။ တစ်ခုမှာ repaint, မီးခိုး, တံခါး, ခေါက်အတောင်ပံများနှင့်ဆန့်ကျင်လိမ်အားရဟတ်။ ထုတ်လုပ်သူအောက်တွင်ရရှိနိုင်ပါသည်: FS2004The Sikorsky CH-124 ပင်လယ်ဘုရင်, ရဟတ်ယာဉ်အတွက် WESTLAND တစ်လှေထဲကနေအသုံးပြုမှုအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲစစ်ရေး Anti-ရေငုပ်သင်္ဘောအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာကနေဒါ vers ဖြစ်ပါတယ် ... ဆက်ဖတ်ရန်
စာရေးသူ Edwin THURSTON ဝီလီ VERVAECKE
Sikorsky Pavehawk uh-60 FS2004 HOT ဒေါင်းလုပ်
Downloads: 15 308
Size: 9.3 ကို MB
ခြွင်းချက်အရည်အသွေးရဟတ်ယာဉ်, ယခု download လုပ်ပါ။5ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်အတူထိပ်တန်းအသံ 2D panel ကိုနှင့် VC.The Sikorsky uh-60 က Black Hawk ရဟတ်ယာဉ် Sikorsky လေယာဉ်ကထုတ်လုပ်မယ့်လေး-Blade, အင်ဂျင်နှစ်လုံးတပ်, အလတ်စား-ဓာတ်လှေကား utility ကိုရဟတ်ယာဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ Sikorsky အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကြည်းတပ်ရဲ့ Utility ကို tac များအတွက် S-70 ဒီဇိုင်းကိုတင်သွင်း ... ဆက်ဖတ်ရန်
စာရေးသူ ယော်ဒန်မြစ် Moore က, Dave Eckert, Dean Baunton, ဘရိုင်ယန် McIntyre, Kirk က Sunley